Eurovision 2022 - जित्नको लागि ठूलो मनपर्ने | बेजिया
सुसाना Godoy | 10/05/2022 14:00 | समाचार
धेरै थोरै जान्न बाँकी छ कसलाई Eurovision 2022 को विजेता घोषित गरिनेछ?। शर्तहरू पहिले नै बनाइएका छन् र यो सत्य हो कि तिनीहरू केवल भविष्यवाणीहरू हुन्, तर विशेषज्ञहरूसँग पहिले नै मनपर्नेहरूको श्रृंखला छ जुन तिनीहरूले सूचीमा पहिलो बीचमा देख्छन्। निस्सन्देह, पछि, जूरी र सार्वजनिक भोट बीच, सबै कुरा परिवर्तन हुन सक्छ।
हामी सेमिफाइनलबाट सुरु गरिसकेका छौं, तर यो सत्य हो कि त्यहाँ 'अछूत' देशहरूको श्रृंखला छ जुन तथाकथित प्रवेश गर्नेहरू हुन्। 'बिग १ 5'। यी ती हुन् जो अब सेमिफाइनलमा जाने छैनन्, तर सीधै फाइनलमा जान्छन्। तीमध्ये पुरस्कार लिन ठूला मनपर्नेहरू पनि देखिन्छन्। के तपाई यो के हो जान्न चाहनुहुन्छ?
1 Eurovision 2022 जित्न मनपर्नेहरू: युक्रेन
2 इटाली फेरि अर्को महान मनपर्ने मध्ये एक हो
3 तेस्रो स्थान बेट्स बीच स्वीडेन जान्छ
4 साम राइडर बेलायतमा
5 स्पेन पनि मनपर्ने मध्ये
Eurovision 2022 जित्न मनपर्नेहरू: युक्रेन
यस्तो देखिन्छ कि ठूला मनपर्नेहरू मध्ये एक, पहिले नै सट्टेबाजहरू बीच पहिलो स्थान लिइरहेको, युक्रेन हो। प्रस्ताव कलुश अर्केस्ट्रा ब्यान्डबाट आएको हो। यसमा हामीले विभिन्न प्रकारका र्‍यापहरू, साथै फोकको ब्रशस्ट्रोकहरू भेट्टाउन सक्छौं र जुन पपसँग जोडिएको छ। अघिल्लो वर्ष युक्रेनले पाँचौं स्थान लियो र यो वर्ष यो सबैको लागि आउँदैछ जस्तो देखिन्छ। ध्वनीहरूको त्यो मिश्रणको लागि धन्यवाद तिनीहरू आफ्नो देशको प्रतिनिधित्व गर्न जनताद्वारा दोस्रो सबैभन्दा धेरै मतदान गरिएका थिए। विजेता एलिना पाश भए पनि विवादका कारण उनी प्रतियोगिताबाट बाहिरिएकी थिइन् । तसर्थ, कलुश अर्केस्ट्रा प्रतियोगिताको लागि आफ्नो सबै आशा लिएर आइपुगेको छ र अहिलेको लागि, तिनीहरूको हात माथि छ जस्तो देखिन्छ।
इटाली फेरि अर्को महान मनपर्ने मध्ये एक हो
उनीहरूले गत वर्ष पहिलो स्थान लिएका थिए, मानेस्किनको नवीनता र प्रतिभाको कारण, यस वर्ष उनीहरू फेरि धेरै बलियो देखिन्छन्। जस्तै बुकमेकरहरूमा इटाली मनपर्ने रूपमा दोस्रो स्थानमा छ। त्यसोभए, जूरी र जनताले वास्तवमै यस्तै सोच्छन् कि भनेर हामीले शनिबारसम्म पर्खनुपर्नेछ। यस समयमा हामीलाई थाहा छ कि प्रदर्शन महमूद र ब्लान्कोको जिम्मामा छ, जसले 'ब्रिविडी' नामक गीत ल्याउँदछ। यो साँचो हो कि महमूद तपाईंलाई परिचित लाग्न सक्छ, किनभने उनले पहिले नै 2019 मा 'सोल्डी' शीर्षकको गीतबाट जितिसकेका छन्। हेरौं तीन वर्षअघिको उनको नियति पनि त्यस्तै छ कि छैन ।
तेस्रो स्थान बेट्स बीच स्वीडेन जान्छ
यस हप्ता के हुन्छ भनेर हामीले अझै पर्खनु पर्छ, तर निस्सन्देह, स्वीडेन अर्को ठूलो शर्त हो। केहि भन्दा बढि किनभने यो तेस्रो स्थानमा राखिएको छ जब हामी यूरोभिजन पूलहरूको बारेमा कुरा गर्छौं। 'होल्ड मी क्लोजर' गीतको साथ स्टेजमा पुग्ने व्यक्ति कर्नेलिया जेकब्स हो।, जुन धेरै शान्त सुरु हुन्छ जस्तो देखिन्छ, तर त्यो उत्सव स्पर्श छ जुन तपाईंलाई धेरै मनपर्दछ। यूरोभिजन गीत प्रतियोगिता २०२२ कोर्नेलियाका लागि नयाँ होइन किनभने उनी २०११ र २०१२ दुवैमा पहिल्यै थिइन्। के उनले यस पटक जित्ने छन्?
साम राइडर बेलायतमा
सेन्ट राइडरलाई आफ्नो मनपर्ने उम्मेदवारको रूपमा छनौट गर्दा युनाइटेड किंगडमले यो धेरै स्पष्ट थियो जस्तो देखिन्छ। सायद यो तपाईलाई धेरै सुनिन्छ, किनकि उनको आवाज संसारभरि घुमेको छ। किनकी साम टिक टोक जस्ता सामाजिक सञ्जालमा निकै लोकप्रिय छ। प्रसिद्ध गीतका टुक्राहरू व्याख्या गर्दै, उहाँले धेरै हृदयहरू जित्नुभएको छ, र यो कमको लागि होइन। यसमा 12 मिलियन भन्दा बढी फलोअरहरू र हजारौं लाइकहरू छन् जसले यसलाई अर्को उत्कृष्ट मनपर्ने बनाउँछ। उनको गीत ‘स्पेस म्यान’ उम्मेदवारहरुका बीचमा फोमझैँ बढिरहेको छ, त्यसैले अन्तिम छनोट थाहा पाउन अब केही दिन कुर्नुपर्नेछ ।
स्पेन पनि मनपर्ने मध्ये
त्यहाँ सँधै सबै स्वादका लागि विचारहरू छन्, तर यस्तो देखिन्छ कि स्पेन पनि5मनपर्ने गीतहरू र बेट्सको प्रदर्शनहरू मध्येको रूपमा बढेको छ। च्यानलले स्टेजमा सबै कुरा दिन्छ र त्यो ऊर्जा सधैं संक्रामक हुन्छ। लाग्छ कि 'SloMo' यो धेरै बलियो संग आउँदैछ र पहिल्यै वेशभूषा र कोरियोग्राफी मा सामयिक रिटच हुनुको अतिरिक्त, यो दांव मा निर्भर शो प्रस्ताव गर्न निश्चित छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » समाचार » Eurovision 2022 जित्नका लागि ठूला मनपर्नेहरू